တက်တူးထိုးတော့မယ်ဆို ဒီအမှားတွေ မလုပ်မိစေနဲ့
ဈေးသက်သာလို့ ပြီးစလွယ်ထိုးလိုက်ပြီးမှ နောင်တရနေမိဦးမယ်။
တက်တူးတွေဆိုတာ အသားပေါ်မှာ ရေးထိုးလိုက်ပြီးရင် သေတဲ့အထိ မြဲနေမယ့်အရာတွေပါ။ မကြိုက်လို့ ပြန်ဖျက်ချင်ရင်တောင်မှ သိပ်ခက်ပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျလည်း များပါတယ်။ တက်တူးထိုးတော့မယ်ဆိုရင် သေသေချာချာကြီး စဉ်းစားပြီးမှ ထိုးသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ တက်တူးထိုးချင်တယ်၊ ထိုးတော့မယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင် ဒါလေးတွေကို အရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်ပါ။
တက်တူးထိုးတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပုံစံထိုးမှာလဲ? ဘယ်ဆိုင်မှာ ဘယ်သူနဲ့ထိုးမှာလဲ? ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုမှ ကွာလတီကောင်းကောင်း လက်ရာကောင်းကောင်းရဖို့ကို သေသေချာချာ စုံစမ်းပါ။ ဈေးသက်သာလို့ ပြီးစလွယ်ထိုးလိုက်ပြီးမှ နောင်တရနေမိဦးမယ်။ ခုဆို တက်တူးဆိုင်တွေ၊ တက်တူးဆရာတွေလည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ရှာလို့ရနေတာပဲဆိုတော့ သူတို့ဆီမှာ တက်တူးထိုးခဲ့သူတွေဆီက အတွေ့အကြုံတွေကို အရင်ဆုံး မေးစမ်းကြည့်ပါ။
တက်တူးဆရာတွေက ကိုယ်နဲ့လိုက်မယ့်ပုံစံကို ပြောပြလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ဆီက အကြံဉာဏ်ကိုပဲ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ သူပြောတဲ့အတိုင်း လက်ခံစရာတော့မလိုဘူးလေ။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့တက်တူးပဲ ရှိနေပါစေ။
တက်တူးထိုးရင် အိမ်ကနှင်ချမယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း တက်တူးထိုးတာနဲ့ အပြတ်ပဲလို့ ရည်းစားက မှာထားတယ်။ ကိုယ်ကလည်း တက်တူးမထိုးဘဲ မနေနိုင်တော့ဘူး။ ဒါဆိုလည်း ရဲရဲသာချလို့ ပြောပါရစေ။ ဘယ်လိုပဲလုပ်လုပ် ပြဿနာတက်ရမယ့်အတူတူ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကိုသာ တက်တူးထိုးလိုက်တာပေါ့။ တကယ်တော့ တက်တူးထိုးတာက မကောင်းတဲ့အလုပ် လုပ်တာမှမဟုတ်ဘဲလေ။ တကယ်ချစ်ရင် ခွင့်လွှတ်ပေးမှာအသေအချာပါ။